တနင်္လာနေ့ မွေးဖွားသူများ အတွက် (၁) နှစ်စာဟောစာတမ်း -၁၃၈၁-ပြည်နှစ်(၂၀၁၉) - Thadin
[ April 22, 2019 ] အတင်းဖက်နမ်းခံလိုက်ရတဲ့ နီနီခင်ဇော် ဗီဒီယိုဖိုင်…! CELEBRITY
[ April 22, 2019 ] လူတိုင်း မသိသေးတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော တစ်ချိူ့အချက်အချက်များ…! HEALTHY
[ April 22, 2019 ] တနင်္ဂနွေ သားသမီးလေးကို ချစ်သူတော်မယ် ဆိုရင် …. RELATIONSHIP
[ April 22, 2019 ] အဆီပိုတွေ လောင်ကျွမ်းသွားစေမည့် (၁၅)မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်း HEALTHY
Homeဗေဒင်ယတြာတနင်္လာနေ့ မွေးဖွားသူများ အတွက် (၁) နှစ်စာဟောစာတမ်း -၁၃၈၁-ပြည်နှစ်(၂၀၁၉)
တနင်္လာနေ့ မွေးဖွားသူများ အတွက် (၁) နှစ်စာဟောစာတမ်း -၁၃၈၁-ပြည်နှစ်(၂၀၁၉)
February 11, 2019 Admin Kwee ဗေဒင်ယတြာ Comments Off on တနင်္လာနေ့ မွေးဖွားသူများ အတွက် (၁) နှစ်စာဟောစာတမ်း -၁၃၈၁-ပြည်နှစ်(၂၀၁၉)
တနင်္လာသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် မိမိအလိုဆန္ဒများ မပြည်ဝတတ်ပေ။ ရှေ့ပိုင်းတွင် အဆင်ပြေသလို့ရှိပြိး နောက်ပိုင်းတွင် အခက်ကြုံမည်။ (14-6-2019)မှစ၍ လုပ်ငန်းခွင်များ စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ သိုသော် အကြံအစည်းအသစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်နှစ်ဖြစ်သည်။
တနင်္လာသားသမီးများ ဤနှစ် ထီဆုကြီးပေါက်နိုင်သည်။ တနင်္လာသားသမီးများ ထီးထိုရန် အရှေ့မြောက်အရပ် (၄)ဂဏန်းအစ (၄)ဂဏန်း အဆုံး ထီးပါ။အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အဆောက်အဦးဝင်လာတတ်သည်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ဝင်လာမည်။ အဆိပ်ရှိသောသတ္တဝါများရန်မှုခြင်းခံရတတ်သည်။
အသက် ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၆၁၊ ၆၃နှစ် အထူးကံကောင်းပါလိမ့်မည်။ ပညာရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်းရေးနှင့် စီးပွားရေး မိမိလုပ်ငန်းမျာအောင်မြင်ခြင်းနှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်းများအကျိုးဖြစ်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရပ်ခြားဘာသာရပ်များ ဖြေဆိုမှုအောင်မြင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီများ သွားရပါလိမ့်မည်။
အလှူတန်းဒါနများပေးရတတ်သည်။ မိသာစုအိမ်တွင် စနေ့၊ ကြာသပတေး၊ တနင်္ဂနွေ သားသမီးရတနာများအတွက်ကြောင့် ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇော်မည်။ နယ်ဝေးဆွေမျိုးများ အိမ်သို့အလည်အပတ်သွားလာခြင်း၊ အကူညီပေးရခြင်းများရှိမည်။ ချစ်သူနှစ်ဦး ငယ်ဟောင်း၊ ချစ်ရေးကွဲကွာသူ၊ အိမ်ထောင်အဆပ်အဟောင်းနှင့် တနေရာတချီမှာ မမျော်လင်ထားဘဲ တွေ့ဆုံး တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး နာလည်းပေးပြိး ပေါင်းသင့်ရတတ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် * 2019-1လ,7လ၊ 10လ*ပိုင်းများတွင် မည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။ လူမှုရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရမည်။
လှုမူဆက်ဆံရေးတွင် လှည့်ပတ်ဖုံးကွယ်မှုကင်းပြိး ကတိတည်လျှင် ဂုဏ်ဒြပ်မြင့်တတ်
လာမည်။ မိမိရပ်တန်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းခွင့်တွင် အပြိုင်အဆိုင်များနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။
2019-1လ,9လ၊ 11တန်းဆောင်မုန်းလများတွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် သတိတရားရှေ့ရှု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းတူ/သူအလုပ်အကိုင် ရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်း ၊ ငွေကြေးထိခိုက်နစ်နာမှုများကြုံတွေရတတ်၍ သတိထားဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နှင့်သာ ငွေစုဆောင်ပြိး လုပ်ကိုင်သွားမည်ဆိုလျှင် ဤနစ်ဒိအချိန်မှာကြီးပွားလာတတ်သည်။
အကြံအစည်းအားလုံးအောင်မြင်မည်။ပင်ပန်းခံရကြိုးနပ်မည်။ရာထူးရာခံတိုးပြိး လူကြီးများက လေးစားယုံကြည်၊မည်သူမှာ မလုပ်ချင်သည့် မလုပ်ရဲသည့်၊အလုပ်များကို ယုံယုံကြည်ကြည် ခိုင်းလိမ့်မည်။
* 2019- 1လ,4လ၊ 8လ*ပိုင်းများတွင် တနင်္လာသားသမီးများ ဒွန်းစဏ္ဍား အကောင်း နှင့် အဆိုး ဒွန့်တွဲနေပါလိမ့်မည်။ မိမိစိတ်လောပြိး ငွေအမြောက်အများရက်နှီး၊ စပ်တူရှယ်ယာထဲခင်း တစ်ခါထဲ ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲ အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။သင်လုပ်သမျှတွေဟာ နောက်မှ ပြင်မရသော အမှားလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်၊ အကြံအစည်များ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေမည်။ ငွေကြေးမြောက်များစွာ မြှုပ်နှံ၍ အရှုံးပေါ် တာမျိူးတွေကြုံရတတ်သည်။
မိမိလုပ်ငန်းခွင်၊ ပြည်ပတွင်းပြည်အလုပ်အကိုင်နိုင်ငံရပ်ခြား အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ပြဿနာအငြင်းပွားစရာများ ဖြစ်လာတတ်၍ နယ်မြေ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိသူများအနေနဲ့ လူမျိုးဘာသာရပ်ကိစ္စရပ်များ၊စဉ်းမျှည်းစည်းကမ်းဥပဒေပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဆူပူမှုးများ အန္တရာယ်ကြုံခြင်း၊ လုပ်ကြံခံရခြင်း၊ အဖမ်းအစည်းများခံရခြင်းဖြစ်လာတတ်သည်။
စီးပွားရေးဂဏ္ဍ 🔹စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် စဉ်းစားဆင်ခြင် သတိထား၍ လုပ်ကိုင်သင့်သည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် ရင်းနှီးမတည်ရသော လုပ်ငန်းများကို လွန်ကဲစွာမလုပ်သင့်ပါ။ ရေလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူ.းရေးလုပ်ငန်း၊ အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ခြင်း၊ပြည်တွင်ပြည်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊
ကွန်ပျူ တာနှင့်တီထွင်ပညာများဆောင်းရွက်ခြင်း၊ ထီး၊ ဖနပ်၊ အထည်အလိပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ချီးခြင်းကောင်း၏။အစုရှယ်ယာဝင် စီးပွားရေး စတော့ဈေးကွက်များ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ့ သားသီးများနှင့် အလုပ်အတူတူသွားလာ၊သွားလုပ်ခြင်း၊စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ခြင်းများ အကျိုးပေးမည်။
အမျိူးသမီးများအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဖန်စိလုပ်ငန်းများအကျိူးခံစားရမည်။ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲများ နှင့် လုပ်ငန်းစပ်တူရှယ်ယာပြုလုပ်လျှင် အောင်မြင်မှုရတတ်သည်။ မနာလိုသူတွေ ပေါများပြီး ချောက်တွန်းချင်းသူများ မိမိဘေးနား ပတ်လည်ဝိုင်း၍ နေလိမ့်ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။
မိမိသဘောထာဖြင့် မိမိထင်ရာ တစွတ်ထိုးမပြုလုပ်ပဲ အမြဲတစေ ဤနှစ် အကြီးအကဲများကို နှီးနှော တိုင်ပင်လုပ်ကိုင်၍ မိသားစုနှင့်လည်း ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်သင့်ပါသည်။ ငွေကြေးပြတ်လတ် ငွေအခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ သတိထားပါ။
သူတစ်ပါးအတွက် အကျိူးပေးသောကိစ္စများ ဦးတည်ချက်ပြောင်းပြိး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကံကိုရတတ်သည်။ မိမိရည်မှန်းထားသောကိစ္စရပ်များက စဉ်းကလျားဖြစ်သွားတတ်သည်။ မိမိရည်မှန်းချက်အတွက် အပျော်အပါးလိုက်စားမှုများရှောင်ကြဉ်ပါ။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးဂဏ္ဍ 🔹မေတ္တာရေးတွက် နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်ကိုဦးစားပေးလျှင် ပိုအဆင်မည်။ ပျိူ ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင် လို့တစ်မျိူးမလို့တစ်မျိူးဆက်ဆံခြင်းခံရတတ်သည်။
အချစ်ရေးတွင် အသုံးချ ခံရတတ်သည်။ မနာလိုသူတို့၏ကုန်ချောစကားကြောင့် အချစ်ရေးကံဆိုးသွားတတ်သည်။
အသက် ၁၉ နှစ် မှာ အသက်၃၀နှစ် အတွင်းရှိ စီပွားရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်းရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ညံပါလိမ့်မည်။အိမ်ထောင်ရှင်များသည်လည်း သားသမီး အပူသောက၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အပူသောက ဤနှစ် ပေါများတတ်ပြိး အိမ်တွင်းရေး အရှုပ်အထွေး ပဋိပက္ခ များတတ်သည့်နှစ်ဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မယုံကြည်စရာများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သတိတရားရှေ့ရှု၍ သွားလာဆောင်ရွက်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အပျောအပါးလိုက်စားခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ထိခိုက်မည်။ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေ အဆင်မပြေမှုကြုံရနိုင်သလို့ လတ်တလုံးခြား လည်းစာပြိး သစ္စာဖောင်ခြင်း၊ ငွေသိန်းရာချီ ငွေလိမ်ခံရကိန်းရှိလို့ သတိထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပညာရေးဂဏ္ဍ 🔹ပညာရေးတွင် ကြိုးစားအားထုတ်မူကောင်းပြိး နောက်ပိုင်းရည်မှန်ချက်များနှင့်ဝေးကွာရတတ်သည်။
မိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ထားရမည်။ ပညာရှာဖွေ့နေသူများသည်အသက်ဝမ်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ကို ဦးစားပေးသင်ကြားပါ။ ဥာဏဆိုင်ရာပညာရပ်များ တီထွင်ဆန်းသစ်သောပညာရပ်များ လေ့လာသင်ယူသင့်သည်။ လူမှုရေးချူပ်ထွေးမှုကြောင့် ပညာရေးနှောင်းနည်းတတ်သည်။
ပညာရေးတွင် ဝိရီယစိုက်ထုတ်မှာသာ အကျိူးထူးခံစားရမည်။ပညာရေးတွင် တခြားလူမှုရေးကိစ္စများပေါ်လာပြိး နှောင်းနှေးမှုများဖြစ်တတ်သည်။ မိဘအုတ်ထိန်းသူများသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးတန်ဖိုးမြင့်တတ်လာမှုကြောင့် အကြပ်အတည်နှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။
ကျန်းမာရေးအနေ့နဲ့ ကတော့ 🔹ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင်း သွေးတိုး၊ သွေးကျ၊ နှလုံးနှင့် ဦးနှောက်အားရုံကြောရောဂါ ၊ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့အပြား ကိုက်ခဲခြင်း မကြာခဏဖြစ်ခြင်း၊ မီးယပ်ရောဂါသွေးအားနည်းရောဂါများခံစားရတတ်သည်။ ကြိုတင်ကျန်းမာရေးလိုက်စားပါ။ အထူးသဖြင့် ယောဂကျင့်စဉ်များ ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။
ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ 🔹 ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် * ရှင်သီဝလီဂါထာတော် * ရွတ်ဆိုပြိးခရီးသွားခြင်း နှင့် * ပန်းရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင် *အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများပြုလုပ်ရာတွင် အဖြူရောင်ရှိ ပုလဲရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆောင်ထားပါ။
အကျိူးပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ(တ၊ ထ၊ န၊ အ) (၁- ၃- ၈- ၆)
တနင်္လာသမီးများ ကံကောင်း စေလိုသော်… အရှေမြောက်အရပ်မှာ ဘုရားဆင်းတုတော် တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း၊ ဘုရား စေတီဟောင်းများ မိမိတတ်သမျှ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။
ချယားပင် စိုက်ခြင်း နှင့် အရှေ့အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာ၌ လက်ပံပင် စိုက်ပါ။ယတြာ ➖ မိမိမွေးနေ့တွင် သရက်ညွန့်၊ သီးညွန့်၊ သဖန်းညွန့်၊ သနပ်ခါးညွန့်(၉)ညွန့်ကို ဘုရားလှူ ပေးပါ။
တနင်ျလာသားသမီးတို့သညျ ယခုနှဈတှငျ မိမိအလိုဆန်ဒမြား မပွညျဝတတျပေ။ ရှပေို့ငျးတှငျ အဆငျပွသေလို့ရှိပွိး နောကျပိုငျးတှငျ အခကျကွုံမညျ။ (14-6-2019)မှစ၍ လုပျငနျးခှငျမြား စတငျဆောငျရှကျရမညျ။ သိုသျော အကွံအစညျးအသဈမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျရမညျနှဈဖွဈသညျ။
တနင်ျလာသားသမီးမြား ဤနှဈ ထီဆုကွီးပေါကျနိုငျသညျ။ တနင်ျလာသားသမီးမြား ထီးထိုရနျ အရှမွေ့ောကျအရပျ (၄)ဂဏနျးအစ (၄)ဂဏနျး အဆုံး ထီးပါ။အိမျ၊ ခွံ၊ မွေ အဆောကျအဦးဝငျလာတတျသညျ။ ဇိမျခံပစ်စညျးမြား ဝငျလာမညျ။ အဆိပျရှိသောသတ်တဝါမြားရနျမှုခွငျးခံရတတျသညျ။
အသကျ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၆၁၊ ၆၃နှဈ အထူးကံကောငျးပါလိမျ့မညျ။ ပညာရေး၊ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျးရေးနှငျ့ စီးပှားရေး မိမိလုပျငနျးမြာအောငျမွငျခွငျးနှငျ့ ပွညျပအလုပျအကိုငျးမြားအကြိုးဖွဈ၍ ပွညျတှငျးပွညျပနိုငျငံရပျခွားဘာသာရပျမြား ဖွဆေိုမှုအောငျမွငျခွငျး၊ ပွညျတှငျးပွညျပခရီမြား သှားရပါလိမျ့မညျ။
အလှူတနျးဒါနမြားပေးရတတျသညျ။ မိသာစုအိမျတှငျ စနေ့၊ ကွာသပတေး၊ တနင်ျဂနှေ သားသမီးရတနာမြားအတှကျကွောငျ့ ဂုဏျသတငျး ကြျောဇျောမညျ။ နယျဝေးဆှမြေိုးမြား အိမျသို့အလညျအပတျသှားလာခွငျး၊ အကူညီပေးရခွငျးမြားရှိမညျ။ ခဈြသူနှဈဦး ငယျဟောငျး၊ ခဈြရေးကှဲကှာသူ၊ အိမျထောငျအဆပျအဟောငျးနှငျ့ တနရောတခြီမှာ မမြျောလငျထားဘဲ တှဆေုံ့း တဈဦးပျေါတဈဦး နာလညျးပေးပွိး ပေါငျးသငျ့ရတတျသညျ။
ယခုနှဈတှငျ * 2019-1လ,7လ၊ 10လ*ပိုငျးမြားတှငျ မညျသညျ့ကိစ်စဆောငျရှကျရာတှငျ အောငျမွငျမှုရရှိမညျ။ လူမှုရေး နှငျ့ ဘာသာရေးဆိုငျရာလုပျငနျးမြားတှငျ ကိုယျတိုငျဦးစီးရခွငျး၊ အမြားသဘောတူညီမှုကွောငျ့ ကုသိုလျရေး လုပျငနျးမြား လုပျကိုငျရမညျ။
လှုမူဆကျဆံရေးတှငျ လှညျ့ပတျဖုံးကှယျမှုကငျးပွိး ကတိတညျလြှငျ ဂုဏျဒွပျမွငျ့တတျ
လာမညျ။ မိမိရပျတနျထားသော လုပျငနျးကိစ်စမြား ပွနျလညျအသကျဝငျလာအောငျ ဆောငျရှကျရမညျ။ သို့သျော လုပျငနျးခှငျ့တှငျ အပွိုငျအဆိုငျမြားနှငျ့ထိပျတိုကျရငျဆိုငျရမညျ။
2019-1လ,9လ၊ 11တနျးဆောငျမုနျးလမြားတှငျ လုပျငနျးခှငျတှငျ သတိတရားရှရှေု့၍ ဆောငျရှကျရမညျ။ လုပျငနျးတူ/သူအလုပျအကိုငျ ရဲ့ သစ်စာဖောကျခွငျး ၊ ငှကွေေးထိခိုကျနဈနာမှုမြားကွုံတှရေတတျ၍ သတိထားဆောငျရှကျရလိမျ့မညျ။ ဆငျဆငျခွငျခွငျနှငျ့သာ ငှစေုဆောငျပွိး လုပျကိုငျသှားမညျဆိုလြှငျ ဤနဈဒိအခြိနျမှာကွီးပှားလာတတျသညျ။
အကွံအစညျးအားလုံးအောငျမွငျမညျ။ပငျပနျးခံရကွိုးနပျမညျ။ရာထူးရာခံတိုးပွိး လူကွီးမြားက လေးစားယုံကွညျ၊မညျသူမှာ မလုပျခငျြသညျ့ မလုပျရဲသညျ့၊အလုပျမြားကို ယုံယုံကွညျကွညျ ခိုငျးလိမျ့မညျ။
* 2019- 1လ,4လ၊ 8လ*ပိုငျးမြားတှငျ တနင်ျလာသားသမီးမြား ဒှနျးစဏ်ဍား အကောငျး နှငျ့ အဆိုး ဒှနျ့တှဲနပေါလိမျ့မညျ။ မိမိစိတျလောပွိး ငှအေမွောကျအမြားရကျနှီး၊ စပျတူရှယျယာထဲခငျး တဈခါထဲ ဆုံးဖွတျခကျြမခဘြဲ အခွအေနနှေငျ့အခြိနျအခါကို ဆငျခွငျသုံးသပျပွီးမှ ဆုံးဖွတျပါ။သငျလုပျသမြှတှဟော နောကျမှ ပွငျမရသော အမှားလညျးဖွဈနိုငျသညျ။ အလုပျအကိုငျ၊ အကွံအစညျမြား အဆငျမပွေ ဖွဈနမေညျ။ ငှကွေေးမွောကျမြားစှာ မွှုပျနှံ၍ အရှုံးပျေါ တာမြိူးတှကွေုံရတတျသညျ။
မိမိလုပျငနျးခှငျ၊ ပွညျပတှငျးပွညျအလုပျအကိုငျနိုငျငံရပျခွား အဖှဲ့အစညျးမြားအတှငျး ပွဿနာအငွငျးပှားစရာမြား ဖွဈလာတတျ၍ နယျမွေ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပရှိသူမြားအနနေဲ့ လူမြိုးဘာသာရပျကိစ်စရပျမြား၊စဉျးမြှညျးစညျးကမျးဥပဒပွေောငျးလဲခွငျးနှငျ့ ဆူပူမှုးမြား အန်တရာယျကွုံခွငျး၊ လုပျကွံခံရခွငျး၊ အဖမျးအစညျးမြားခံရခွငျးဖွဈလာတတျသညျ။
စီးပှားရေးဂဏ်ဍ 🔹စီးပှားရေး လုပျငနျးမြား လုပျကိုငျရာတှငျ စဉျးစားဆငျခွငျ သတိထား၍ လုပျကိုငျသငျ့သညျ။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျး လုပျကိုငျသူမြားသညျ ရငျးနှီးမတညျရသော လုပျငနျးမြားကို လှနျကဲစှာမလုပျသငျ့ပါ။ ရလေုပျငနျး၊ မှေးမွူ.းရေးလုပျငနျး၊ အပနျးဖွစေခနျးဖှငျ့ခွငျး၊ပွညျတှငျပွညျဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားလုပျခွငျး၊
ကှနျပြူ တာနှငျ့တီထှငျပညာမြားဆောငျးရှကျခွငျး၊ ထီး၊ ဖနပျ၊ အထညျအလိပျရောငျးဝယျခွငျး၊ စားသောကျကုနျပစ်စညျးမြားဖွနျ့ခြီးခွငျးကောငျး၏။အစုရှယျယာဝငျ စီးပှားရေး စတော့ဈေးကှကျမြား ဝယျယူနိုငျသညျ။ တနင်ျဂနှေ၊ဗုဒ်ဓဟူး၊ စနေ့ သားသီးမြားနှငျ့ အလုပျအတူတူသှားလာ၊သှားလုပျခွငျး၊စပျတူရှယျယာလုပျခွငျးမြား အကြိုးပေးမညျ။
အမြိူးသမီးမြားအတှကျ ဖကျရှငျဆိုငျဖှငျ့ခွငျး၊ အလှကုနျပစ်စညျးမြားနှငျ့ ဖနျစိလုပျငနျးမြားအကြိူးခံစားရမညျ။ လူမြိုးကှဲ၊ ဘာသာကှဲမြား နှငျ့ လုပျငနျးစပျတူရှယျယာပွုလုပျလြှငျ အောငျမွငျမှုရတတျသညျ။ မနာလိုသူတှေ ပေါမြားပွီး ခြောကျတှနျးခငျြးသူမြား မိမိဘေးနား ပတျလညျဝိုငျး၍ နလေိမျ့ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။
မိမိသဘောထာဖွငျ့ မိမိထငျရာ တစှတျထိုးမပွုလုပျပဲ အမွဲတစေ ဤနှဈ အကွီးအကဲမြားကို နှီးနှော တိုငျပငျလုပျကိုငျ၍ မိသားစုနှငျ့လညျး ညှိနှိုငျး ဆှေးနှေးလုပျကိုငျသငျ့ပါသညျ။ ငှကွေေးပွတျလတျ ငှအေခကျအခဲ ကွုံတှရေ့တတျသညျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးမြား သတိထားပါ။
သူတဈပါးအတှကျ အကြိူးပေးသောကိစ်စမြား ဦးတညျခကျြပွောငျးပွိး ဆောငျရှကျခွငျးဖွငျ့ ကံကိုရတတျသညျ။ မိမိရညျမှနျးထားသောကိစ်စရပျမြားက စဉျးကလြားဖွဈသှားတတျသညျ။ မိမိရညျမှနျးခကျြအတှကျ အပြျောအပါးလိုကျစားမှုမြားရှောငျကွဉျပါ။
အခဈြရေးအိမျထောငျရေးဂဏ်ဍ 🔹မတ်ေတာရေးတှကျ နှလုံးသားထကျ ဦးနှောကျကိုဦးစားပေးလြှငျ ပိုအဆငျမညျ။ ပြိူ ရှယျသူမြားအခဈြရေးတှငျ လို့တဈမြိူးမလို့တဈမြိူးဆကျဆံခွငျးခံရတတျသညျ။
အခဈြရေးတှငျ အသုံးခြ ခံရတတျသညျ။ မနာလိုသူတို့၏ကုနျခြောစကားကွောငျ့ အခဈြရေးကံဆိုးသှားတတျသညျ။
အသကျ ၁၉ နှဈ မှာ အသကျ၃၀နှဈ အတှငျးရှိ စီပှားရေး၊ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျးရေး၊ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး ညံပါလိမျ့မညျ။အိမျထောငျရှငျမြားသညျလညျး သားသမီး အပူသောက၊ မိဘ၊ ညီအဈကိုမောငျနှမ အပူသောက ဤနှဈ ပေါမြားတတျပွိး အိမျတှငျးရေး အရှုပျအထှေး ပဋိပက်ခ မြားတတျသညျ့နှဈဖွဈသညျ။
အိမျထောငျရှငျမြား တဈဦးနှငျ့တဈဦး မယုံကွညျစရာမြားဖွဈလာလိမျ့မညျ။ သတိတရားရှရှေု့၍ သှားလာဆောငျရှကျရမညျ။ အိမျထောငျရှငျမြား အပြောအပါးလိုကျစားခွငျးကွောငျ့ အိမျထောငျရေး ထိခိုကျမညျ။ အိမျခွံမွလေုပျငနျးလုပျကိုငျသူတှေ အဆငျမပွမှေုကွုံရနိုငျသလို့ လတျတလုံးခွား လညျးစာပွိး သစ်စာဖောငျခွငျး၊ ငှသေိနျးရာခြီ ငှလေိမျခံရကိနျးရှိလို့ သတိထားသငျ့ပါတယျခငျဗြာ။
ပညာရေးဂဏ်ဍ 🔹ပညာရေးတှငျ ကွိုးစားအားထုတျမူကောငျးပွိး နောကျပိုငျးရညျမှနျခကျြမြားနှငျ့ဝေးကှာရတတျသညျ။
မိမိစိတျကိုတညျငွိမျထားရမညျ။ ပညာရှာဖှနေ့သေူမြားသညျအသကျဝမျးကွောငျးနှငျ့ သကျဆိုငျရာပညာရပျကို ဦးစားပေးသငျကွားပါ။ ဉာဏဆိုငျရာပညာရပျမြား တီထှငျဆနျးသဈသောပညာရပျမြား လလေ့ာသငျယူသငျ့သညျ။ လူမှုရေးခြူပျထှေးမှုကွောငျ့ ပညာရေးနှောငျးနညျးတတျသညျ။
ပညာရေးတှငျ ဝိရီယစိုကျထုတျမှာသာ အကြိူးထူးခံစားရမညျ။ပညာရေးတှငျ တခွားလူမှုရေးကိစ်စမြားပျေါလာပွိး နှောငျးနှေးမှုမြားဖွဈတတျသညျ။ မိဘအုတျထိနျးသူမြားသညျ အဆငျ့မွငျ့ပညာရေးတနျဖိုးမွငျ့တတျလာမှုကွောငျ့ အကွပျအတညျနှငျ့ ရငျဆိုငျရတတျသညျ။
ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ ကတော့ 🔹ကနျြးမာရေးအတှကျ စိတျဖိစီးမှုကွောငျး သှေးတိုး၊ သှေးကြ၊ နှလုံးနှငျ့ ဦးနှောကျအားရုံကွောရောဂါ ၊ခန်ဓာကိုယျနရောအနှံ့အပွား ကိုကျခဲခွငျး မကွာခဏဖွဈခွငျး၊ မီးယပျရောဂါသှေးအားနညျးရောဂါမြားခံစားရတတျသညျ။ ကွိုတငျကနျြးမာရေးလိုကျစားပါ။ အထူးသဖွငျ့ ယောဂကငျြ့စဉျမြား ပွုလုပျရနျသငျ့တျောသညျ။
ဆောငျရှကျစရာကိစ်စ 🔹 ယခုနှဈတှငျခရီးသှားခွငျးနှငျ့လုပျငနျးကိစ်စအဆငျပွရေနျအတှကျ * ရှငျသီဝလီဂါထာတျော * ရှတျဆိုပွိးခရီးသှားခွငျး နှငျ့ * ပနျးရောငျ၊ အဖွူရောငျ၊ အဝါရောငျ *အဝတျအထညျမြားဝတျဆငျခွငျးနှငျ့ထိုအရောငျမြားကိုအဆောငျအဖွဈအသုံးဆောငျအဖွဈအသုံးပွုနိုငျသညျ။
မိမိလုပျငနျးဆောငျတာမြားပွုလုပျရာတှငျ အဖွူရောငျရှိ ပုလဲရတနာ ဝတျဆငျပါ။ ဆောငျထားပါ။
အကြိူးပေးသောအက်ခရာနှငျ့ဂဏနျးမြားမှာ(တ၊ ထ၊ န၊ အ) (၁- ၃- ၈- ၆)
တနင်ျလာသမီးမြား ကံကောငျး စလေိုသျော… အရှမွေောကျအရပျမှာ ဘုရားဆငျးတုတျော တညျထားကိုးကှယျခွငျး၊ ဘုရား စတေီဟောငျးမြား မိမိတတျသမြှ ပွုပွငျခွငျး၊ ဆေးသုတျခွငျး၊ ရောငျတျောဖှငျ့ခွငျးမြားပွုလုပျပါ။
ခယြားပငျ စိုကျခွငျး နှငျ့ အရှအေ့ရပျ လမျးဘေးဝဲယာ၌ လကျပံပငျ စိုကျပါ။ယတွာ ➖ မိမိမှေးနတှေ့ငျ သရကျညှနျ့၊ သီးညှနျ့၊ သဖနျးညှနျ့၊ သနပျခါးညှနျ့(၉)ညှနျ့ကို ဘုရားလှူ ပေးပါ။
လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
၆ တန်းကျောင်းသားမှ အသက် ၅နှစ် KG တန်း သမီးလေးအား ကာမကျူးလွန်မှုဖြစ်
This Month : 36458
This Year : 177915
Total Users : 536939
Views Today : 2553
Total views : 2428855